i-nickel ebhulashiweyo yokubamba isibambo esinye
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / WOWOW 3 Hole 4 Inch Centreset Faucet
Isikhombisi esenziwe nge-faucet briking nickel style classic retro: Iminwe yasimahla, imelana nokudumba.
Idesika ebambekile yamaphepha amabi ifanelekile yamkelekile kwindawo yokuhlala, ikhondinium entsha, igumbi elinye, ikhaya elihamba ngemoto, umhambi wokuhamba, kunye nosetyenziso lwendlu.
2320700 imiyalelo yokufaka
Iinkcenkce zokuhlambela zeNickel faucet 2320700 iinkcukacha:
Gcina amanzi namanzi kuwe: wakhelwe kwi-aerator ye-1.2kupm, unika indawo yokuhlamba yokuhanjiswa, ubuncinci ngama-20 eepesenti amanzi kunesiqhelo, ukonga imali yakho ngaphandle kokwenza umsebenzi.
Ucoceko lokusebenzisa umngxunya wokudibanisa ubandakanyiwe: isitulo sokuhlambela esifakelwe isitovu sibandakanya ukudibana kwendlu, amanzi avela kwisinki yokucofa ngokucinezela ipali yenqanawa, ukuthintela ukuntywila izandla zakho.
Iqokobhe ledreyini ye-cypic-eyakhelweyo: eyakhelwe kwindawo enkulu yokugcina ityhubhu yeceramic, ijikeleza kakuhle ukuze iqinisekise ngokulawula ubushushu bamanzi kunye nokusetyenziswa kwexesha elide ngaphandle kokudonsa
Kukhuselekile ukusebenzisa: zonke iitephu zokucofa zokuhlamba zinelayisensi kuthi, i-nsf61-9, ab 1953 imigangatho yeshishini engakhokhelwa. Umzimba we-faucet wenziwe ngesinyithi esipheleleyo, unamandla kwaye uqinile.
Isiqinisekiso sobomi esilinganiselweyo: sinikezela ngesiqinisekiso seminyaka emi-3 ngokuchasene nokuvuza, ukudipha, ukwaphuka, kunye nokugqibezela iziphoso.
Isiteji sokuhlamba igumbi lokuphumla siludlulile kuvavanyo lweetyuwa, oko kuthetha ukuba aluchaphazeleki nasekorweni.
Imveliso ayinakuze ivelise iingxaki ze-tuli.
Akukho bur burs, scratches, okanye amabala kumphezulu wayo.
Ifakwe kumhlaba ngokugqitywa, imveliso ayifumaneki.
I-SKU: 2320700 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo tags: Uqhekeze uNickel, classic, Hlamba, isambisi
5.3 x 6 x 6.7 intshi
Uyilo olu-3 lwe-intshi yoyilo lwe-intshi
I-NSF yodongwe ivalve yediski, xuba amanzi, imingxuma emi-3 kuyilo lweziko, kulula ukuyifaka, 4 ukuphatha ukuphatha amanzi ashushu nabandayo, i-satin nickel